Tombony, raha ny fanazavan’ny tale misahana ny ambaratonga faharoa sy fampiofanana ho an’ny daholobe, Christian Rakotozanany, dia ny hahafahan’ireo mpianatra mahazo vatsim-pianarana sy diplaoma eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fahazoana mandranto fianarana amina oniversite toy itony na ho an’ny eto an-toerana na any ivelany dia maneho ny fivelarana indrindra ao anatin’izao andron’ny fanatontoloana izao. Manana oniversite manan-danja isika saingy tery ny toerana eto. Ny volana martsa izao no hisy ny fifantenana voalohany. Tsy mbola voafaritra hatreto ny isan’ireo hisitraka izay vatsim-pianarana izay ho amin’ity taona ity. niisa 19 kosa tamin’ny taon-dasa. Tanjona ny hampitombo avo roa heny izany amin’ity taona ity ary anton’ny fiaraha-miasa amina fikambanambe toy izao, hoy hatrany ny fanazavana.